U Nyan Win Tun
B. Sc (Credit ) , M. Sc ( Mathematics )
from Yangon University
-Tutor , University of Medicine (2) , Yangon ( 14.2.2001 – 3.5.2001)
-Tutor and acting Head, University of Medicine Magway ,( 7.5.2001 –20.10.2011 )
-Assistant lecturer and Head, University of Medicine Magway , ( 20.10.2011
_ 24 .6. 2016 )
- Lecturer and Head, University of Medicine Magway , ( 23.6.2016 - 0nwards)
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေးသို့ Delta Science Co, Ltd မှ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် Delta One Spectrophotometer အား သက်ဆိုင်ရာဌာနများရှိ တာဝန်ရှိသူများကို သရုပ်ပြဆောင်ရွက်မှုများ ကျင်းပပြလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ(၂၂)ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ) ကျောင်းသား/သူများ၏ စာမေးပွဲစစ်ဆေးနေမှုအား ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (သင်ကြား)မှ လည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် ပထမအမ်ဘီဘီအက်စ် (၁၂/၂၀၁၈) သင်တန်း Mega We Care ပညာသင်ဆု လျောက်ထားသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအခမ်းအနားကို ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ (Chamber Room) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့သော ပထမအမ်ဘီဘီအက်စ် အတန်းတင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေမှုအား ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်တို့မှ လှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး၏ အလုပ်သင်ဆရာ၀န်များ လူထုဆေးပညာသင်တန်း ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက် (သောကြာနေ့)၊ နံနက်ပိုင်းတွင် အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်၊ မြဧရာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ (ကလေးကျန်းမာပညာ) ပထမနှစ် (၁/၂၀၁၉) သင်တန်းမှ သင်တန်းသား/သူများ၏ PROTOCOL အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီတွင် BLOC (C-301) ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ လူထုဆေးပညာသင်တန်း ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား (၇.၆.၂၀၁၉) သောကြာနေ့
Lunch Time Talk By Rector, Professor Htay Hla, SAFE BLOOD, START WITH ME (6.6.2019)
Housesurgeon Skill Training (6.6.2019)
အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ လူထုဆေးပညာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ပါမောက္ခဒေါက်တာနေဝင်း (ဥက္ကဌ)၊ သုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး အကြံပေးအဖွဲ့ MMA)သည် Application of PCR and its variants ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လာရောက်ဟောပြောခြင်း (UMMG) ၂၄.၅.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့)